के छोराहरुले सम्हालान त नेता जोशीको राजनीतिक बिराषत ?
राजेन्द्र परियार २१ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार १७:०९
नेता गोविन्दराज जोशीका दुई छोराहरु मध्ये जेठो छोरा काठमाडौँ स्थित निजि कलेजमा अध्यापकको रुपमा कार्यरत छन्,भने कान्छो छोरा अस्ट्रेलियाको एक अन्तराष्ट्रिय कम्पनीमा कार्यरत छन् । आफले जसलाई साथ दिएका थिए उनीहरुबाट नै सहयोग र साथ नपाए पछि नेता जोशीे हतपत आफ्नो राजनैतिक बिराषत जिल्लाका नेता तथा कार्यकर्ताको हातमा सुम्पने अवस्थामा छैनन् । जिल्लामा उनका पुराना कांग्रेसका कार्यकताहरुले अझै पनि उनको साथ छोडेका छैनन् । अझै पनि उनलाई मान्ने कार्यकता जिल्लामा १० देखी १५ हजार रहेको जानकारहरु बताउँछन् । उनका पछि लाग्ने कार्यकर्ताको राजनैतिक यात्रा सुरक्षित पार्न मात्र भएपनि उनले राजनैतिक बिराषत कसैलाई सम्हाल्न दिनु पर्ने देखिन्छ । यस्तो अबस्थामा उनले कसलाई राजनैतिक दायित्व सुम्पिन्छन् भन्ने प्रश्न बेलाबेलामा उठ्ने गरेको छ । यसै बिषयमा प्रस्तुत छ लेखक राजेन्द्र परियार र दिपकराज जोशी बिचको संवाद ।
के तपाई राजनीतिमा आउनु हुन्छ त ? के बुवाको राजनीतिक यात्रा तपाईले अघि बढाउनु सक्नु हुन्छ ?
लेखकः राजनीतिलाई कसरी व्याख्य गर्नुहुन्छ ?
दीपकराज जोशी: मेरो परिभाषामा निस्वार्थ रुपमा देश र जनताको सेवामा खटिनु नै राजनिती हो।राजनितीका बारेमा ४ लाइन लेख्न नसक्ने , राजनीतिशास्त्रको ज्ञान नभएका, संसार कुनदिशा तर्फ गइरहेको छ र त्यसको असर कसरि पर्र्दैछ भन्ने थोरै पनि अड्कल गर्न नसक्नेलाई जागिर दिए जसरी पद दिनु भयो भने तपाँइले तिरेको करको दुरुपयोग मात्र हुनेछ । समाजलाई सधैँ भरी कांग्रेस र कम्युनिष्टमा विभाजन गरेर कति समय सम्म जनतालाई अँध्यारोमा राख्ने ?आजको समाज र अबको पुस्तालाई राजनीति भन्दा माथि सोच्ने व्यक्तिको खाँचो छ । राजनैतिक पार्टी माध्यम मात्र हुन् । राजनैतिक पार्टीमा रहनेहरुमा जब सम्म मेरो पार्टी र मैले मात्र विकास गर्न सक्छु वा यो देश बनाउन सक्छु भन्ने भ्रम हुन्छ, तब सम्म यो समाज परिवर्तन हुँदैन र देश विकास हुँदैन। विकास र समृद्धि सामुहिक कार्य हो । हाम्रो समाजमा आफु राम्रो हुन अरुलाई नराम्रो बनाउने,आफु जित्न अरुको खुट्टा तान्ने प्रतिस्पर्धा नै छ । सच्चा मानेमा राजनितीमा लाग्नेहरुले आफुले जित्न अरुलाई हराउनु पर्दैन । जनताको हित र जितमा रमाउन जान्नुपर्छ।
दीपकराज जोशी: परिवारका योग्य सदस्यहरू राजनीतिमा आउँदा वंशवादलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । त्यतिबेला समाजलाई नराम्रो हुन्छ, जतिबेला योग्यता नभएका वंशका उत्तराधिकारीहरूलाई नै जनताले राजनीतिको मुकुट लगाएको हेर्न चाहन्छन् । यसको परिणाम जहिले पनि गैर राजनैतिक परिवारबाट आएका निर्दोषहरुले भोग्नुपर्छ । जो वंशवादवाला राजनैतिक परिवारले चलाएको राजनैतिक दलको झुटो नाराहरूको शिकार हुन्छन् र सधैँ उनीहरू वंशवादी नेताहरूको दयामा जिउन बाध्य हुन्छन् ।तर यदि परिवार भित्र बाटै कोहि सक्षम व्यक्ति छ र जसले राजनैतिक विरासत धान्न सक्छ भने त्यसमा नातावाद कृपावाद भनेर विरोधकै लागि मात्र बिरोध गर्न मिल्दैन।
दीपकराज जोशी: हुन त कोही नभएर सम्पुर्ण कुराहरु बन्द हुन्छन् चल्दैन भन्नु मुर्खता सिवाय केही होइन। म अभ्यासमा विश्वास राख्ने मान्छे हुँ।तर पनि जोशी विहिन तनहुँ कांग्रेस बिग्रिँदै गएको जनता सामु सर्वविदितै छ । तनहुँमा राजनिती गर्नेले के गरे के गरनन् पनि भनिरहनु पर्दैन होला । बिकास त परै जाओस् आफ्नै पार्टीलाई आगाडि पनि बनाउन सकेनन्।
दीपकराज जोशी: हुन त राजनितीमा आउनको निम्ति कुनै किसिमको दायराहरु निर्धारण गरिएका छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। किनकी हामीले राजनितीलाइ यस्तो बनाइदियौँ कि जो सबैभन्दा खराब छ उसलाई राजनितीमा ल्याउने र कालोलाई सेतो बनाउने,यो त भयो राजनितीको नकारात्मक पाटो। मेरो मतलब राजनितीमा आउने सम्पुर्ण खराब हुन् भन्ने विल्कुलै होइन। सकारात्मक पाटो नै हेर्ने हो भने पनि म सँग एउटा असल राजनीतिज्ञमा हुनुपर्ने सबै गुण छ जस्तो लाग्छ । राजनीतिमा सबै भन्दा ठुलो कुरा इमानदारीता हो । जो म सँग छ । मलाई न केहि लिनु छ न केहि पाउनु छ । म केवल दिन चाहान्छु ।
म दीपकराज जोशी,गोविन्दराज जोशीको छोरा मात्र नभएर देशको उन्नति र परिवर्तन चाहने युवा पनि हुँ। म बुवाआमा सँग बस्छु । धूम्रपान गर्दिनँ । रक्सी पिउँदिन मांशाहार गर्दिनँ । जनावरबाट आएका कुनै पनि बस्तु प्रयोग गर्दिनँ । म भिगानिजममा विश्वास गर्छु ।जसले गर्दा मलाई भौतिक वस्तुहरु प्रतिको मोह कम छ । । म हरेक हप्ताको मंगलबार उपवास बस्छु । सूर्य उदाउनु भन्दा अगाडी उठ्छु ।हरेक दिन १ –२ घण्टा योग÷ प्राणायाम गर्छु । सूर्य अस्त हुनु अघि खाना खान्छु । म सबै प्रकारका ( भजन , रक, हेवी मेटल, पप, लोक, आधुनिक, अङ्ग्रेजी , हिन्दी , नेपाली, …) सङ्गीत सुन्छु । सबै प्रकारका सिनेमाहरु हेर्छु , म डिस्को, पब, क्लब पनि जान्छु । मैले ट्याटु पनि खोपेको छु । म आधुनिक जीवन शैली बाट पनि टाढा छैन । यम जसमा पाँच सामाजिक नैतिकता छन् । जस अन्तर्गत
दीपकराज जोशी: यदी जोशिको छोरा नभएको भए पनि राजनीति गर्न सक्ने र समाजलाई अहिलेको स्थिति बाट राम्रो बनाउन सक्ने हैसियत म मा छ जस्तो लाग्छ। तर के गर्ने यहाँ प्रोत्साहान गर्ने भन्दा निरुत्साह गर्नेहरुको भीड जो छ ।मैले जुन जिबनशैली अपनाएको छु, त्यो राजनितीमा आउनेहरूका लागि नभइ नहुने चरित्र हो । सबैभन्दा मुख्य कुरा राजनीतिमा आउनेहरूले आफ्ना लागि होइन देश र जनताका लागि समर्पित हुनुपर्छ।यसरी असल साबित हुन नसकेको काङ्ग्रेस र पटकपटक काङ्ग्रेसको छाताभित्र अटाउन नसकेको काङ्ग्रेसको छोरोसँग पनि विरासत धानिदिए हुने,भन्ने इच्छा सहित तपाइँ तनहुँमा आएर राजनीति गर्नु पर्यो भनेर धेरैले मलाई आग्रह सहितको संदेश पठाउनु भएको छ । त्यसको लागि तपाइँ सम्पुर्णमा म मनैदेखि कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु।तनहुँमा जन्म लिन पाएकोमा म आफुलाई भाग्यमानी सम्झन्छु । म भित्र देशका लागि केहि गरुँ भन्ने इच्छा सदैब थियो र छ पनि।झन् तनहुँ त मेरो जन्मभूमि, मेरो आफ्नो माटो त्यसको माया कसलाई हुँदैन र? जसले मलाई झक्झकाई रहन्छ।तर म सँग राजनीति गर्नको लागि अरु सँग भए जस्तो योग्यता छैन । म जे अभ्यास गर्छु त्यो प्रचार गर्छु र जे प्रचार गर्छु त्यो अभ्यास गर्छु।
हामी अर्के संवादमा नेता जोशीका कान्छा छोरा दिनेशराज जोशी संगको कुराकानी तपाईहरु बिच प्रस्तुत गर्ने छौं ।
विपन्न पन्ध्र परिवारलाई न्युडेको खाद्यन्नय सहयोग
२० जेष्ठ २०७८, बिहीबार २०:४५
१९ जेष्ठ २०७८, बुधबार ०९:३१